Macalin Jaamacadeed, Oo Sii Jiitay Quluubta Rayul-caamka
Macalin Jaamacadeed, Oo Soo Jiitay Quluubta Rayul-caamka
Shiinaha (Dhamays) – Bare wax ka dhiga jaamacad ku taala dalka Shiinaha, ayaa hooyadii oo waayeel ah, isla-markaasna xanuunsanaysa u kaxeeya fasalkii uu casharrada ka bixinayo, kadib markii uu waayay qof uu kaga sii tago.
Macalinkan oo lagu magacaabo Hu Ming oo ku nool koonfur galbeed gobolka Guizhou ee dalka Shiinaha ayaa si joogto ah fasalka ugu soo kaxeeya Hooyadii oo ah Qof Waayeel ah.
Ardayda ayaa markii hore u qaatay in haweenayda xagga dambe ee fasalka fadhida ay tahay macalimad hore oo hawlgab noqotay, si kormeer ahna ku joogta fasalka, balse markii dambe waxa ay ogaadeen in ay tahay macalinkooda hooyadii.
Sheeko uu arrintan ka qoray Wargeyska Beijing Youth Daily ayaa waxaa baraha bulshada lagu faafiyay wax ka badan 7,000 jeer, astaanta (Like) ayaa waxaa la saaray 100,000 , waxaana laga bixiyay 9,000 oo aragtiyo badan oo dhammaantood lagu ammaanayo macalinkan.
Haweenaydan ayaa waxa ay qabtaa xanuunka ilowshiiyaha, waxaana dhacday in dadkii kale oo dhan ay wada ilowday, xitaa gabadh ay iyadu dhashay oo ay Macalinkana Walaalo yihiin, sidaasi darteedna uu macalinkan isu xilsaaray in uu daryeelo hooyadii.
Ilowshiiyaha ayaa waxa uu gaadhay heer aan xad lahayn, iyada oo aanan xitaa kala garanaynin sokorta iyo Saabuunta Budada ah, halisna u ah in ay wax kasta ku dhacaan.
Macalinkan ayaa sheegay in hooyadii mararka qaarkood ay fasalka ku dhex gama’do mararka kalena ay iska dhagaysato casharrada iyada oo xagga dambe fadhida.
Waxa uu intaas ku daray in dhaqankeeda fasalkeeda dhexdiisa uu yahay mid aad u wanaagsan oo aanan wax buuq iyo dhibaato ku abuurin ardayda.
Maamulka Jaamacadda uu dhigo macalinkan ayaa waxa ay sheegeen in ay ka gaabsanayaan arrinta in macalinka uu hooyadii fasalka keeno.
Dadka qaarkood ayaa sheegay in macalinkani uu ardayda barayo casharka ugu wanaagsan Aadduunka, oo ah in waalidka loo baarri noqdo.
Deraasad la sameeyay sanadkii 2010-kii ayaa lagu sheegay in Shiinaha ay ku noolyihiin dadka ugu badan ee la nool xanuunka Ilowshiiyaha (Hilmaanka).
Waxaa kale oo jirta in dadka shiinaha ay sii gaboobayaan, waxaana intaas lagu daray in marka la gaadho sanadka 2030-ka dadka shaqeeya ee Shiinaha ay ka badnaan doonaan dadka gaboobay ee iyaga ku tiirsan.
Baarrinimada waalidka waa qeyb weyn oo muhiim ah oo ka mid ah dhaqanka Shiinaha. Iyada oo xitaa xilligii boqortooyadii Han dadka dowladda u shaqaynaya lagu xulan jirey hadbo sida ay u kala baarrisan yihiin.
Sidoo kale, in Waalidka la daryeelo isla-markaana Ubadkoodu baarriyiin u noqdaan, ayaa ka mid ah Tiirarka ugu muhiimsan ee Diinta Islaamka.
Previous: Hargeysa: Qiimaha Biyaha Oo Sicir Gaar Ah Loo Jaray
Next: AKHRI: Aqoonyahan Da’yar Oo Soo Jeediyey Talooyin Iyo Muuse Biixi Oo Soo Dhaweeyay